Zmags: Muuqaalka Muuqaalka iyo Qaybinta | Martech Zone
Zmags: Daawade Infographic iyo Qaybinta
Talaado, September 25, 2012 Talaado, September 25, 2012 Douglas Karr
Waxaan had iyo jeer ka waabaneynay soo saarista sawir-gacmeedka oo jiifa sababtoo ah waxay yihiin xanuun noocaas ah si loo qaybiyo. Macaamiisheenna, Delivra, waxay sameeyeen uun sawir-gacmeed cajiib ah wuxuu isbarbar dhigayaa laba emayl… kuwa fiican iyo kuwa xunba. Dhibaatada ka jirta muuqaalka jiifka ah ayaa ah inaysan dhab ahaantii ku habboonayn qaababka ugu badan. Ma qaadan kartid sawir muuqaal ah oo ballaran 1,000 pixels oo si raaxo leh ugu riix 600 oo gobol oo ballac ah.
Daawade Zmags badbaadinta! Adoo adeegsanaya iframe, waxaan si fudud u qaabeyn karnaa 1 bog oo daawade oo leh faahfaahinta ku dhex jirta. Waxaan xitaa ku dari karnaa iskuxiraha cinwaanka daawadeyaasha cinwaanka bogga internetka! Koodhku waa sahlan yahay… kaliya dhig ballaca iyo dhererka sida aad u rabto daawadayaasha inuu muujiyo.
Guji "Toggle Fullscreen" waxaadna u soo qaadan kartaa xog-ururinta shaashad buuxda iyo digsi iyo weyneysaa dhammaan, adoo arkaya dhammaan faahfaahinta. Faa'iidada kale ee weyn ee habkani waa inaad ku dari karto koontadaada Google Analytics ee daawadaha oo aad arki karto tirada aragtida!
Taageerida kafaalaqaadka adoon iibin naftaada
Oktoobar 3, 2012 at 11:28 AM
Rag yahow, Cody halkan, laga bilaabo Delivra. Waxaan rabay inaan ugu mahadceliyo Doug maqaalkan laakiin si ka sii muhimsan ayaan qof walba u ogaanayaa inaan aragnay jawaab weyn oo ku saabsan shaxanka jiifka ah. Mararka qaarkood sameynta wax ka duwan, keligiis iyo naftiisa, ayaa dadka xiiseynaya. Waxay ka caawineysaa in infographku uu yahay mid aad u qurux badan oo macluumaad leh. Daawade Zmags waa badbaadiye wuxuuna si fiican ugu shaqeeyaa aaladaha noocyadooda oo dhan (talo soo jeedin kale oo weyn oo ka timid Doug).
Oktoobar 4, 2012 at 6:37 PM
Mahadsanid Cody! Iyo shaqo weyn oo ku saabsan infographic !!!